आफ्नै श्रीमति छिमेकीसँग रङ्गेहात भेटेपछि श्रीमतिको टाउको छिनाएर जे गरे ! – PathivaraOnline
Home > समाज > आफ्नै श्रीमति छिमेकीसँग रङ्गेहात भेटेपछि श्रीमतिको टाउको छिनाएर जे गरे !
आफ्नै श्रीमति छिमेकीसँग रङ्गेहात भेटेपछि श्रीमतिको टाउको छिनाएर जे गरे !
admin November 3, 2020 November 3, 2020 समाज	0
एजेज्सी । सामाजिक सञ्जालमा अहिले अ’नैतिक स’म्बन्धको खबर निकै चर्चामा रहेको छ । परपुरुष वा परस्त्रीसँग लाग्ने दम्पतीहरुको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ । तर यो एकदम भयानक हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी दिन गइरहेका छौँ । ती ब्यक्ति जस्ले आफ्नी श्रीमतीलाई गाउँका एक युवकसँग अ’नैतिक स’म्बन्ध राखेको देखेका थिए । जनब‍ोलीमा समनचार छ ।
आरोपित लामो समयसम्म हातमा उक्त टाउको लिएर गाउँमा घुमेका पनि थिए । जब गाउँलेहरूले यो दृश्य देखे, मानिसहरू डराएर भाग्न थालेका थिए भनेर दैनिक भास्करले लेखेको छ । देवा थाना क्षेत्रको माविया गाउँमा एक जना व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको शिर हटाएका थिए । उनले त्यो मात्रै गरेनन् उक्त हटाएको टाउको लिएर लामो समय गाउँमा घुमेका पनि थिए । उनले आफ्नी श्रीमतीलाई गाउँका एक युवकसँग अ’नैतिक स’म्बन्ध राखेको देखेका थिए ।
०७७ कार्तिक १९ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०४ तारिख बुधबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
फेरि नेपालकि प्रिन्साले १६ देशलाइ पछार्दै जितिन ‘गोल्डेन क्विन अफ २०२०’
१४ वर्ष जेल जीवन विताएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीसँग पत्रकार एच.बीका यस्ता छन् १४ मागहरू